နတ်မောက်တွင် ချောင်းရေစီးနှင့် ဆီဘောက်ဆာယာဉ် မျောပါ - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၁-မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နတ်မောက်မြို့နယ်တွင် ကားလမ်းပေါ် ချောင်းရေကျော်သဖြင့် ဆီဘောက်ဆာယာဉ် တစ်စီးရေစီးနှင့်မျောပါခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နတ်မောက် မြို့နယ် ရွာမွန်ကျေးရွာ မြောက်ဘက်တစ် မိုင်ခွဲခန့်အကွာရှိ ကျောက်ပန်းတောင်း-နတ်မောက်ကားလမ်းပေါ်တွင် ဇူလိုင် ၂၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က မိတ္ထီလာမှ နတ်မောက်သို့မောင်းနှင်လာသည့် ဆီ ဘောက်ဆာယာဉ်မှာ အခင်းဖြစ်နေရာ အ ရောက်တွင် ကားစက်ရပ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုစဉ် ကားလမ်းသို့ ရွာသစ်ချောင်းမှ ချောင်း ရေများဖြတ်လာခဲ့ကာ ကားမှာချောင်း ရေနှင့်အတူမျောပါသွားခဲ့ကြောင်း နတ် မောက်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်း မော်က ပြောသည်။
ရွာသစ်ချောင်း၏အကျယ်အဝန်း မှာ ပေ ၄ဝ သာရှိပြီး ရေကျော်ချောင်းဟု ခေါ်ကြောင်း၎င်းကပြောသည်။
” မိုးကမနက်ခင်းတုန်းက နည်းနည်း များတယ်။ အဲဒီချောင်းက ပုံမှန်ဆို ချောင်း ရေသိပ်မကျဘူး။ ပုံမှန်လေးပဲရှိတယ်။ ဆီ ဘောက်ဆာကား။ ဆီမပါဘူး။ အခွံချည်း ပဲ။ အဲဒီနားအရောက်မှာ ချောင်းကျတဲ့ အချိန်မှာစက်ရပ်တာ။ အဲဒီမှာ ကားက ချောင်းထဲပါသွားတာ။ နတ်မောက်က ကား လမ်းတွေကို ချောင်းတွေဖြတ်တာများ တယ်။ စက်ကရပ်သွားတော့ ချောင်းရေ ကျတဲ့ အချိန်ပါသွားတာပေါ့။ စက်ရပ် တာတော့ ရေကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့”ဟု ၄င်း က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ဆီဘောက်ဆာယာဉ်မှာ ချောင်းထဲ သို့ ကားလမ်းမှနေ၍ ပေ ၅ဝ ခန့်အကွာ သို့မျောပါသွားပြီး ကားရှေ့ဘီးများနစ်မြုပ် နေကြောင်း နတ်မောက်မြို့နယ် အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ဦးဝင်းမော်က ပြောသည်။
”ဆယ်နေတယ်။ ကားက ချောင်းရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သဲထဲစိုက်ပြီး မြုပ်နေတာ ပေါ့။ ဆွဲလို့မရသေးဘူး။ ဘက်ဟိုးနဲ့လုပ် ဖို့စီစဉ်နေတယ်။ ကားကရှေ့ဘီးတွေ သဲ ကပ်ပြီးတော့ ရှေ့ဘီးတွေမြုပ်နေတာ။ အခုဆယ်ယူရေးကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်။ နောက်တစ်ခါရေကျရင်ပါသွားမှာစိုးလို့။ အခုထိတော့မရသေးဘူး”ဟု ၄င်းက ပြော သည်။
မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆည်မြောင်းအဖွဲ့များက ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း သိရသည်။
ဆီဘောက်ဆာယာဉ်ပေါ်တွင် ယာဉ် မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်တစ်ဦးတို့ သာရှိပြီး မျောပါချိန်တွင်အောက်၌ ဆင်း နေသဖြင့် လူထိခိုက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့ ကြောင်း နတ်မောက်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူး ဦးဝင်းမော်က ပြောသည်။
ပွဲရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည့် ကာဂျစ္စတန်-မြန်မာပွဲစဉ်ကို ကြားကွင်းတွင် ပြန်ကစားရန် အာရှဘောလုံးအဖွဲ?
လုံခြုံရေး စည်းဝိုင်းအတွင်း လုံခြုံရေးမ ကျိုးပေါက်ရေး
ဟယ်ရီစတိုင်၏ တစ်ကိုယ်တော် နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေပွဲ၏ နောက်ဆုံးပွဲအား ကင်ဒယ်ဂျန်နာ တက်ရောက်အား??